2020 Outlander Sport အမျိုးအစားရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကိုကြေညာလိုက်တဲ့ Mitsubishi ! – MyMedia Myanmar
2020 Outlander Sport အမျိုးအစားရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကိုကြေညာလိုက်တဲ့ Mitsubishi !
Mitsubishi ရဲ့ Outlander Sport အမျိုးအစား ( ဒီဇိုင်း ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ 2021 Outlander နှင့်မတူ ညီ ) ကတော့ 2021 Model Year အတွက်ကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Package နဲ့ Trim Level ‌တွေလည်း ပါဝင်လာသလို Standard Drive Assist Features တွေကိုလည်း Trim Level တိုင်းမှာ ထည့်သွင်းလာနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတွေနဲ့ အတူ ဈေးနှုန်း အသစ်တွေ ကိုလည်း ထုတ်ဖော် ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး S 2WD Trim အတွက်ဆိုရင် ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ $ 20,995 အထိ ကျသင့်လာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော အမျိုးအစား အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ Fully Loaded GT AWC Trim ဟာ ဆိုရင်လည်း ဈေးနှုန်း အပိုင်းမှာ $ 26,995 အထိ ရှိလာနိုင်ကာ အဆိုပါ ဈေးနှုန်း တိုင်းမှာတော့ Destination Fees အနေနဲ့ $ 1,095 မပါဝင် သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု 2021 Model အတွက်ကတော့ Trim Level တွေ အနေနဲ့ ဆယ်ခုအထိ ရှိလာမှာပါ။ အဆိုပါ အမျိုးအစားတွေထဲမှာ မှ Limited Edition အသစ်လည်း ပါ ဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ အနက်ရောင်သီးသန့် Edition လည်း ပါဝင်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Limited Edition အနေနဲ့ကတော့ $ 23,995 အထိ ကျသင့်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး အနက်ရောင် အပြင်ဘက်က မှန် တွေ ၊အနက်ရောင် Grille တွေနဲ့ အနက်ရောင် ၁၈ လက်မ အလွိုင်းဘီးတွေ ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
ကားရဲ့ အတွင်းခန်းမှာတော့ ထိုင်ခုံတစ်လျှောက်အပြင် ၊ Gear Shifter တွေ ၊ စတီယာတိုင်‌တွေ နဲ့ ပါကင်ဘရိတ် လီဗာတွေမှာ အနီရောင် Accent လေးတွေ နဲ့ပါ အလှဆင် ပေးထား ဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ရောင် Edition က တော့ FWD အရ သို့မဟုတ် AWD နဲ့ ပွဲထွက် လာနိုင်ပြီး ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ အရှေ့ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက် က Air Dams တွေ ကိုလည်း မြင်တွေ့ရနိုင်ကာ Red Accents တွေအပြင် GlossBblack တွေနဲ့လည်း ဖုံးအုပ် ပေး ထား ဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အနက်ရောင် အုပ်ထားမယ့် အပြင်ဘက် မှန်တွေနဲ့ တံခါး လက်ကိုင်တွေလည်း ပါဝင်လာ ဦးမှာ ဖြစ်ပြီး အနက်ရောင် ၁၈ လက်မ အလွိုင်း ဘီးတွေ ကိုမှ အနီရောင် Accent ‌တွေ ၊ တစ်မူ ထူးခြားတဲ့ တံဆိပ် ပိုင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့ အနောက်ဘက်က Spolier တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ အပြင် ဘက် အရောင်တွေ အနေနဲ့လည်း လေးရောင် အထိရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Red Diamond လို့ ခေါ်တွင်ထားတဲ့ အနီရောင် ၊ Pearl White ဆိုတဲ့ အဖြူရောင်၊ Black Labrador ဆိုတဲ့ အနက်ရောင်နဲ့ Sunshine Orange လို့ ‌ခေါ် ဆိုထားတဲ့ လိမ္မော်ရောင်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ S နဲ့ ES trims တွေ ကလွဲလို့ 2021 Outlander Sport ကားအသစ် တိုင်း ဟာ ဆိုရင် ရှစ်လက်မ အရွယ် Display Screen ကိုမှ Apple Carplay နဲ့ Android Auto တို့ကိုပါ တစ်ပါ တည်း ရရှိနိုင်မှာပါ။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Base Trim နှစ်မျိုး အနေနဲ့ကတော့ Standard အဖြစ် ၇ လက်မ အရွယ် Display တွေ ကိုပဲ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ရင်းနှီးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ 2.0 Liter MiVEC DOHC Four-Cylinder Engine ကိုပဲ တွေ့ရနိုင်ပြီး 148 hp နဲ့ 145 lb-ft Torque တို့ အထိစွမ်း ဆောင်လာနိုင်မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ FWD မှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် AWD Configuration တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ် မြို့တွင်းမှာ ဆိုရင် 24 mpg ပမာဏ ၊ အဝေးပြေးလမ်းအတွက် ဆိုရင် 30 mpg ပမာဏ နဲ့ နှစ်မျိုးလုံးမှာ မောင်းနှင်မယ် ဆိုရင်တော့ 27 mpg ပမာဏ လောက် အထိ ရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ GT AWC ဖြစ်တဲ့ All Wheel Control စနစ်မှာ ဆိုရင်တော့ ပိုမို စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ 2.4 Liter Four Cylinder Engine ကို တပ်ဆင် ပေးထားနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အနေနဲ့ 168 hp နဲ့ 167 lb-ft Torque တို့ အထိ ရှိနိုင်ကာ မြို့တွင်း တစ်ဂါလံကို ၂၃ မိုင်နဲ့ မြို့ပြင် တစ်ဂါလံ ကို ၂၉ မိုင် တို့ အထိ မောင်းနှင် နိုင်မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကားဟာ Mitsubishi ကုမ္ပဏီ အတွက် အရောင်းရဆုံး ကား အမျိုးအစား တစ်စီးလည်း ဖြစ်တာ ကြောင့် ပိုပြီးတော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိလာနိုင်အောင် Forward Collision Mitigation စနစ် တွေလည်း ပါဝင်လာဦးမှာ အသေ အချာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် လမ်းထဲက ကားထွက်လာတာ ကို ကြိုတင် ကြည့်ပေးနိုင်မယ့်စနစ် ၊ အလိုအလျောက် လုပ် ဆောင် နိုင်မယ့် High Beam မီးစနစ် တို့ကို Trims တွေ အကုန်လုံးမှာ Standard အနေနဲ့ပဲ ထည့်သွင်း ပေးလာ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာတာကို အလိုအလျောက် အာရုံခံနိုင်မယ့် Windshield Wipers စနစ် တွေ ၊ LED Fog Lights တွေနဲ့ အခြားသော အလို အလျောက် လုပ်ဆောင်မယ့် Headlights စနစ် တွေကလည်း စံစနစ် အနေနဲ့ပဲ ပါဝင်လာ မှာ ဖြစ်ပေမယ့် Base S Trim တစ်ခုမှာတော့ ချန်လှပ် ခဲ့ဦးမှာပါ။ အဆိုပါ ကားတွေ ကိုတော့ လာမယ့် လ မှာ တင် နိုင်ငံ တစ်ဝန်း စတင် ရောင်းချသွားတော့မှာ ဖြစ်လို့ အတော်လေး စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းနေပြီ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
The post 2020 Outlander Sport အမျိုးအစားရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကိုကြေညာလိုက်တဲ့ Mitsubishi ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-06T14:34:44+06:30January 6th, 2021|MYCARS MYANMAR|